प्रस्ताव माओवादीको कार्यान्वयन जिम्मा अरूको
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको लामो समय भएको छैन । संसारको इतिहासमा राजतन्त्र हटाउँदा रक्तपात, युद्ध भएको पाइन्छ तर नेपालमा राजतन्त्र विना रक्तपात बिदा भएको थियो । राजतन्त्रलाई अन्तिम अवस्थामा तत्कालीन शाही सेनाले समेत सहयोग गरेन । राजावादी पनि मौन बसे । गणतन्त्रको नारा नदिने काँग्रेसले पनि गणतन्त्रको मागलाई समर्थन गरेको थियो । तत्काल गणतन्त्रको मागको विरोध गर्ने एमालेले पनि गणतन्त्र आउने बेलामा स्वीकार गरेको थियो । माओवादीले जनयुद्ध गर्दाकै अवस्थामा गणतन्त्रको नारा दिएको थियो । अन्ततः राजतन्त्रको ज्यादती, निरंकुशताको कारण समेत मिसिएर नेपालमा वैधानिक ढंगबाट नै विना रक्तपात नेपाली जनताले गणतन्त्र प्राप्त गरेका हुन् ।
गणतन्त्र र सङ्घीयता आपसमा जोडी नै हुन् । राजतन्त्रमा सङ्घीयता फस्टाउन त के टिक्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । सङ्घीयता र गणतन्त्रको जोडी संसारमा फस्टाएको छ । भारतमा गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता हुर्केको छ । अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, जर्मनी आदि नमुना हुन् । संसारका प्रायः पुरानो इतिहास भएका देशमा राजतन्त्र थिए । विस्तारै ती राजतन्त्र उडे अनि गणतन्त्र आयो । जस्तै छिमेकी मुलुक भारत र चीन । दुवै देशमा गणतन्त्र तर नेपालमा केही बढी समय राजतन्त्र रह्यो । यसको प्रभाव नेपाली जनतामा पनि परेको थियो तर नेपालका केही ठूला भनिएका दल अलमलमा परेको कारण माओवादी ‘जनयुद्ध’ गणतन्त्रको प्रमुख कारक बन्यो । यसलाई तत्कालीन काँग्रेस, एमालेलाई गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न बाध्य बनायो । संविधान सभाको माग पनि गणतन्त्रको निम्ति ठूलै फड्को थियो । राजा भएको मुलुकमा संविधान राजाले जारी गर्ने हो । तर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषय पनि राजतन्त्रको लागि विष नै थियो । त्यसैले राजा र उनका मतियार दलहरूले शुरुमा संविधानसभाको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैले हजारौँ नेपालीले बलिदान गर्नु परेको थियो । अहिले माओवादीलाई १७ हजार मान्छे मारेको आरोप केही अबुझले लगाइरहेका छन् । यी १७ हजारले बलिदान गणतन्त्रको निम्ति दिएका थिए । तत्कालीन राजतन्त्र र त्यसका मतियारले ती हजारौँ नेपाली मारेका थिए । त्यही जनयुद्धको जगमा गणतन्त्र आयो । त्यसको फल नेपाली जनताका छोराछोरीले नेपालको राष्ट्रपति भएर देश हाँक्न पाएका छन् । जसले गणतन्त्रको मागलाई बेवास्ता गरेको थियो त्यही दलले राष्ट्रपति हुन पाएको इतिहास गजबको छ संसारमा नै । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयताका विरोधी नै यसका हिमायती देखिएको निर्वाचन पनि यहीँ भएको छ । गणतन्त्र नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनाव तीन प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा बस्नपर्ने गरी मतदान भएको छ । यसमा अनेक तर्कं वितर्क गरिएका छन् । माओवादी केन्द्र पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा संलग्न भएको हो । पञ्चायत, बहुदलीय सबै स्थानीय चुनावमा भाग लिएको थिएन । सङ्घीय प्रणालीको चुनाव नेपालमा पहिलो पटक भएको कुरा पनि बिर्सन हुँदैन । तसर्थ यो पुराना चुनावहरूको नियमिता होइन । माओवादी केन्द्रको निम्ति यो नयाँ अभ्यास हो । यसका उम्मेदवार पनि प्रायः नयाँ हुन् । विभिन्न षडयन्त्र, टिकडम, खुराफाती काम गर्न अभ्यस्त दलहरूले आश, त्रास, भ्रम, जाल प्रयोग गर्न जानेका छन् । यसबाट बचेर जनताले जुन मत माओवादी केन्द्रलाई दिए त्यो मत असली हिराजस्तो छ । जो रछानको रासमा रहँदा पनि कुहिँदैन । जुन मत छ त्यसले रक्तविजको रूपमा अब काम गर्छ । यो चुनावबाट माओवादीले दश वर्ष युद्ध गरेर आर्जन गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई निर्वाचित सबैले स्थानीय तहको कुर्सीमा बसेर पालना गर्नु पर्छ – चाहे त्यो एमाले होस् चाहे त्यो काग्रेस वा अरू नै किन नहुन् ।
सङ्घीयताको जग हालियो । गणतन्त्रको जनमत प्राप्त भयो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भयो । यही कुराका निम्ति जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढी जनताले बलिदान गरेका हुन् । अब सबैले माओवादीको प्रस्ताव वमोजिम काम गर्नु पर्छ । यो नै माओवादी केन्द्रको जित हो ।
माओवादीले यो चुनावबाट हरेक गाउँमा आफ्ना नेता तय गरेको छ । अब ती नेताबाट संगठन सुरु हुन्छ । त्यही संगठनले जनसेवा गर्छ । प्रगतिशिल परिवर्तन गर्छ । यी दुवै निर्वाचन सम्पन्नताको प्रतिफल हो । यो नै माओवादी केन्द्रको यो चुनावको उपलव्धी हो । चुनावको परिणामलाई धेरै किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ । समानुपातिक, समावेसी, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति संविधान सभा र सो सभाबाट संविधान–यही नारामा तत्कालीन सत्तामा बसेका राजा, काँग्रेस, एमालेसँग माओवादीको हाक्काहाक्की हतियारयुक्त युद्ध भयो । यी नै माग पूरा नगर्न तीनैथरि मिलेर माओवादी र ‘जनयुद्ध’ समाप्त पार्न १० वर्षसम्म कोशिस गरे तर ती सफल भएनन् । अन्ततः माओवादीले उठाएका प्रस्तावमा काँग्रेस, एमाले सहमत हुन बाध्य भए । राजासँगको मोह भंग गरे । संविधान बन्यो । सो संविधान पालना गर्ने सिलसिलामा स्थानीय निर्वाचन पनि प्रथम चरणको सम्पन्न भयो । चुनावमा एमाले र काँग्रेसले धेरै मत ल्याए । के अब ती जनप्रतिनिधिले माओवादीले उठाएका धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी, गणतन्त्र र सङ्घीयता विरुद्धमा जान सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् । जनताले उनीहरूलाई हिजो तिमीहरूले विरोध गरेर १७ हजार मान्छे मारिएका थिए, यो प्रस्ताव लागु गर्न दिँदैनौ भनेर अब त्यसको प्रायश्चित गर्न कुर्सीमा बस र त्यही प्रस्तावको पालना गर भनेर सजाय स्वरूप पदमा राख्ने काम जनता गरेका छन् । यो आदेश बाध्यताबस उनीहरूले पालना गर्नु पर्छ । यसमा गडबढ गरे भने जनताले ककारबाही गर्ने छन् । माओवादी केन्द्रले यसको मसिनुसँग रखबारी गरेर बस्नु पर्नेछ । यो नै चुनावको निर्णय हो । काँग्रेस, एमाले राम्रा भएर होइन, उनीहरूलाई हिजो विरोध गरे वापत मोक्ष प्राप्तिको निम्ति जनताले यो जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । आज हरेकजसो स्थानीय निकायमा महिला नेतृत्व भएको छ । वडैपिच्छे दलित र नारीको प्रतिनिधित्व छ । के यो माओवादी जनयुद्धको प्रतिफल होइन ?
संविधान जारी भएको वर्ष दिन बितिसक्यो । यो अब आउने माघ ७ भित्र सबै तहको चुनाव गराउनु पर्नेछ । दोस्रो चरणको चुनाव निम्ति मधेशी नेताहरूसँगको वार्ता अनुरूपको काम गर्न प्रक्रिया थाल्नु पर्छ । मधेशीले पहिला संविधानको पुनर्लेखनको माग गरे । नाकाबन्दी समेत गरे । विस्तारै संविधानको संशोधनको मागमा आए । प्रदेशको सिमाना हेरफेरमा लामो समय अडान लिए । अहिले स्थानीय तहको संख्या खासगरी ७४४ बाट ७६६ बनाएमा चुनावमा भाग लिने संकेत दिए । प्रथम चरणको चुनाव मधेशी मोर्चा समेतको सर्मथनमा भयो । अब दोस्रो चरणाको चुनाव पनि भाग लिने मेलोमा छन् । के यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सबल एवं सक्षम नेतृत्व होइन ? विपक्षी दल समेत प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको र हुन लागेको चुनावप्रति दह्रो समर्थन जनाइरहेको छ ।
तसर्थ चुनाव कुन व्यक्ति, कुन दलले जित्यो भन्दा पनि संविधानको पालना र परिवर्तनको जग हालियो भन्ने कुरा महìवपूर्ण छ । चुनाव त योपटक एक दलले धेरै, अर्कोपटक अर्को दलले धेरै सिट ल्याउन सक्छ । अब स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्न सम्बन्धित कानुन आवश्यक छ । स्थानीय तह सञ्चालन गर्नको निम्ति चुनाव अगावै कानुन बन्नु पर्ने थियो तर बन्न सकेन । तसर्थ निर्वाचित जनसरकारहरू अलमलमा छन् । यस्तोमा छिटो छिटो ती कानुन पारित गर्नु पर्नेमा विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्नुमा अहमता देखिन्छ ।